Qaramada Midoobay oo ka digtay fatahaado aan hore loo arag | KEYDMEDIA ONLINE
Qaramada Midoobay oo ka digtay fatahaado aan hore loo arag
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay khatar xooggan oo ka jirta gobollada ay maraan labada wabi ee Shabeelle iyo Jubba, kuwaas oo fatahaado aan hore loo arag geysan doona maalmaha soo socda, sida ay sheegayaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay'adda cunnada u qaabilsan Qaramada Midoobay ee FAO, ayaa ka digtay halista sare ee ay leedahay fatahaadda ba'an ee ka jirta Soomaaliya, iyadoo ay sii kordhayaan heerarka biyaha Wabiga Shabeelle.
Sida lagu sheegay war-bixintii ugu dambeysay, ugu yaraan 150,000 oo qof ayaa halis degdeg ah ugu jira daadad soo socda maaddaama heerarka wabiyada ay hadda buux dhaaf yihiin roobabka mahiigaan ah oo da’ay awgood.
FAO, waxa ay sheegtay in Wabiga Shabeelle uu buux dhaafay, khatartiisuna sare u kacday labadii toddobaad ee la soo dhaafay, waxaa loo aaneeyay roobab xad dhaaf ah oo aan horay loo arag oo ka da'ay qeybaha sare ee buuraleyda Itoobiya gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay.
Hadal uu soo saaray, Ezana Kassa, Madaxa Barnaamijka FAO ee Soomaaliya wuxuu ku sheegay in la joogo waqtigii wax laga qaban lahaa arrintaan si loo hubiyo badqabka iyo ladnaanta dadka ay saameynta ku yeelan karaan daadadkan aan horay loo arag.
FAO, Waxa ay ka digtay fatahaado ka dhaca magaalooyin ay ugu horreyso Baladweyne, kuwaas oo haddaba ka biloowday gobolka Shabeellaha dhexe, waxaana cabsida sii siyaadinaya qararka wabiyada Soomaaliya oo burburay iyo dacaytir la’aan guud oo heysatay muddo dheer.
Wabigga Jubba ayaa saadaal ahan, ka khatar yar midka Shabeelle. waxaase daadad heer dhexe ah laga soo sheegayaa magaalada Doolow.
Chris Print, oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay’ada FAO ee Soomaaliya, wuxuu sheegay inay jirto xaalad deg deg ah oo ay sababtay cimilada Soomaaliya iyo gobolka oo dhan, isagoo xusay in saameynta isbadalka cimilada ay ku yeelaneyso dadka inta badan laga dareemi doono biyaha.
Inta badan Wabiga Shabeelle ayaa ku fataha, hereeraha aagga uu maro, marka la gaaro xilliga Guga ‘Gu’- oo ah xiili roobaadka ugu muhiimsan Soomaaliya, waxuuna sababaa qasaaro lixaad leh oo naf iyo maalba leh.
Dhanka kale, roobab mahiigaan ah, oo Jimcihii ka da’ay magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimasho iyo burbur ba’an, iyadoo la xaiijiyay ku dhawaad geerida 15 caruur ah, kadib daadad ka dhashay roobka oo ahaa mid xooggan.